Aza odian-tsy hita ny fanajana, ny fampifanarahana ary ny fanaovana fandaharana tsara | Martech Zone
Aza odian-tsy hita ny fanajana, ny fampifanarahana ary ny fanaovana programa tsara
Raha toa aho ka mamorona rindranasa avy hatrany am-boalohany, misy zavatra sasantsasany izay azoko antoka fa tanteraka:
Takela-by miendrika cascading - amin'ny alàlan'ny fanasarahana ny sosona hita maso ny fampiharanao amin'ny afovoany sy any ambadika dia tsy mila manao mihoatra noho ny fanovana rakitra vitsivitsy ianao hanovana ny interface interface amin'ny tranokalanao. CSS Zen Garden maneho ny herin'ny CSS amin'ny fomba mahagaga. Ny HTML dia tsy miova manerana ny tranokala, fa rehefa mifanakalo eo anelanelan'ny lohahevitra ianao dia ampiharina ny takelaka vaovao ary miova ny tranokala. Hanoro hevitra azy ireo koa aho boky.
Modely - Ny môdely pejy no 'afovoany-antonony' eo anelanelan'ny tendronao sy ny faran'ny voalohany. Ity dia misintona ny kaody famerenana tena izy avy ao amin'ireo pejy ary avy amin'ny modely fotsiny no nanondroany izany. Ny tombony amin'ny môdely dia manampy amin'ny fanavahana ny varimbazaha amin'ny katsaka. Ny fampiasa any aoriana dia tsy hanimba ny fiasan'ny pejy sy ny mifamadika amin'izany.
Kaody fampiharana mahazatra - tsy tokony hanoratra fehezan-dalàna mitovy indroa ao anaty ny fampiharana mihitsy ianao. Raha manao izany ianao dia diso ny fanoratanao ny fangatahanao. Rehefa mila manova ianao dia tokony mila manao an'io fanovana io amin'ny llocation tokana.
Database - mitahiry data ao anaty tahiry. Ny fitehirizana angona amin'ny sosona hafa dia mitaky asa bebe kokoa!
Fanarahan-dalàna XHTML - satria nanjary nihanatanjaka kokoa ny teknolojia toy ny Content Management Systems, API, RSS, ary fitaovana fampidirana atiny hafa, dia tokony ho tsotra ny fampitana ny atiny. Zava-dehibe ny fenitra XHTML satria mora 'azo entina' amin'ny tranokala, serivisy na toerana hafa ny atiny.
Fampiasana cross-browser - Tsy mitovy ny fomba itondran'ny mpitety tranonkala HTML sy CSS. Betsaka ny hacks izay miantoka ny fiasan'ny cross-browser. Tokony hanohana ireo mpizahatany 3 ambony indrindra amin'ny indostria foana ianao amin'ny famoahana 3 farany tsirairay avy. Ankoatr'ireo dia tsy hanelingelina ahy aho… ho faty izany raha tsy afaka manaraka ny alika be ry zareo.
Fampiasana cross-platform - ny fampiasa sasany dia tsy mitovy na atolotra eo anelanelan'ny PC, Mac, ary Linux. Raha manao ny dingana rehetra teo aloha ianao dia tsy tokony hahita olana, fa mbola hizaha toetra ihany aho!
Ny fanandramana manamboatra fantson-drano amin'ny trano efa vita dia lafo. Ny fanaovana 'fantson-drano' tsara eo alohan'izay dia hitahiry vola be ianao amin'ny lasa!
Nahita loharano lehibe antsoina hoe The Scrutinizer eo am-pamakiana bilaogy hafa, antsoina Bytes Random. Farany, raha mitady ho lasa rindranasan'ny orinasa manana lavitra sy sehatra malalaka ianao, dia hitandrina ireo mpiasa tsy miraharaha na tsy miahiahy momba ireo entana ireo aloha. Mitadiava olona mikarakara izany! Ho mora kokoa amin'ny fiainana ny fiainanao.
Sep 5, 2006 ao amin'ny 4: PM PM
Vao nihazakazaka ny fitsapana Suttide.com aho ary nahazo 7.9, ary nametraka bokotra teo amin'ny tranokalako aza, misaotra doug!